Qaar ka midda Musharaxiinta Puntland oo warsaxaafadeed kasoo saaray magacaabista gudigga xalinta khilaafadka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Qaar ka midda Musharaxiinta Puntland oo warsaxaafadeed kasoo saaray magacaabista gudigga xalinta khilaafadka
December 1, 2018 - By: Mohamud Nadif
Qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntland oo maanta ku shiray Magaalada Garoowe ayaa warsaxafadeed kasoo saaray hanaanka doorashada ee Puntland si gaara waxay uga hadleen soo magacaabista gudiga xalinta khilaafaadk oo dhawaan lagu wado in la magacaabo, waxay cod dheer madaxweyne Gaas ugu sheegeen in magacaabista gudigaa laga wada tashado, musharaxiinta kulankaan ka qaybgalay ayaa kala ahaa Eng Mohamud Khalif Hasan Diric Jabiye, Cabdulaahi axmed Jano Gale , Dr Aadan Maxamed Ciise Gadaale , Eng Mohamed Cabdilaahi Xuseen Shoortaaye Gen Khaliif Ciise Mudan, waxaa iyaguna qayb ka ahaa balse aan kulan ku sugnayn Dr Saciid Cabdilaahi Deni Gen Saciid Maxamed Xirsi Dheere
War saxaafadeed ayaana u qornaa sidaan
” Annaga oo ah Musharrixiinta madaxweyne ee Puntland doorashada 2019 isuguna jira ku dalka jooga iyo kuwo maqanba, waxaannu kulamo gaar ah ka yeelaney xaaladda Puntland, Doorashada 2019, iyo dhismaha guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka. Markaan aragnay warqadda ka soo baxday madaxweynaha xilku ka dhammaanaayo ee ku saabsan soo xulidda Xildhibaannada golaha wakiillada.
Guddiga Xalinta Khilaafadka iyo Ansixinta Xildhibaanada
a. Waxaa marag ma doonta ah in soo xulidda xildhaibaannada beelaha sanadkan la gashey khilaaf aan waligii ka dhacin Puntland, taas oo si ku talagal ah uu madaxweynaha talada hayaa u maleegaayo waana wax aan taariikhda Puntland hore u soo marin.
Wuxuuna si ku talaggal ah Musharax-Madaxweyne Cabdi-weli Mohamed Ali Gaas u dejiyey in ay xubno badan oo wata liisas is-khilaafsan iyo saxiixyo isimmo/nabadoono kala duwan ka yimaadaan beelo kala duwan, si uu madaxweynuhu ugala dhex baxo kuwa isagu uu rabo. Waxaana u meel marinaaya guddi keligiis uu soo xulanaayo kuna magacaabay: Guddiga Xalinta Khilaafadka iyo Ansixinta Xildhibaanada
b. Waxaa wax aad looga xumaado ah oo aan sina loo aqbali Karin in qabiil kala sooc ba’an uu madax weynuhu kula dhex jiro beelaha xildhibaannada iska soo xulaya qaarka uu u arko in uu qabiil ahaan uga xoog roon yahay, uu xubnohooda cidduu rabo ku qorto si cadna isaga indha tiro saxiixyada nabadoonnada iyo isimmada beelahaas. Waxaa kale oo jirta in qabiillada uu madaxweynuhu u arko in aysan xoog badan lahayn ama isimmadoodu meelo fog jiraan oo aan Garowe imaan karin uu si toos ah qofkuu rabo u marsado guddiga khilaafaadka.
6. In xubnaha guddiga aysan ka mid noqon qof ay maxkamadi dembi ku xukuntay
Ugu danbayn waxaan Isimmada, Culumaauddiinka, ciidamada, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Puntland ugu baaqaynaa in xilligaan kala guurka ahay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii awalba looga bartay adkaynta amnigooda, wadajirkooda iyo horumarkooda sigaar ahna u garab istaagaan ciidamada amniga, waana taas midda aan guusha kugaari karno ”
Murashaxiintasoosaaray war saxaafadeedkaan:
4. Eng. Maxamuud Khaliif Xasan (Jabiye)
5. Eng. Maxamad Cabdullahi Xuseen (Shortaaye)